Itoobiya oo su’aalo weydiinaysa xaaska Cabdi M. Cumar iyo Jidhdil loo geystay xubno kamid ah Maamulkii Soomaalida | KALSHAALE
Itoobiya oo su’aalo weydiinaysa xaaska Cabdi M. Cumar iyo Jidhdil loo geystay xubno kamid ah Maamulkii Soomaalida
Aug 12, 2018 - 6 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Saraakiisha ammaanka dowladda Itoobiya ayaa su’aalo weydiinaya mas’uuliyiintii ugu sarraysay maamulkii uu madaxda ka ahaa Cabdi ileey ee fadhigiisu ahaa magaalada Jigjiga.
Magaalada Dhagaxbuur melleteriga Itoobiya waxay xireen boqolaal dhalinyara ah oo ay ku eedeeyeen in ay qeyb ka yihiin xoogaga ka dagaallama dhulka Soomaaligalbeed.
Inta badan deegaannada dhulka Soomaaligalbeed hadda wax maamul ah kama jiro waxaana dadka kadeed ku haya melleteriga Itoobiya kadib markii uu burburay maamulkii uu madaxda ka ahaa Cabdi iley.
Raysal wasaaraha cusub ee Itoobiya ayaa wado isbadalo waaweyn oo uu ku sameenayo maamulada hoostago dowladda Federaalka Itoobiya, waxaana muuqato in cadaadis xoog leh la saaray Tikreyga iyo Soomaalida.
Waa in si fiican loo soo dhaweeyaa maatida soo gashay gashay jam somland ee waliba somalida ah oodi ab ka dhaw gacmo furan ha lagu soo dhaweeyo waxaan ka daawaday saab tv iyagoo hadlaya magan waa la dhawraa waana la sooraa intii itaalkeena ah waa dadkeenii kilimka shanaad waana soomali soo dhaweeya intay dopnayaan ha joogeen yaan la dhibin oon dib loo celin badbaadiya waa dadkeenii
Alle waa Garsoore.
Xaniiyo siibkii Wadaadada
Meyd Muslim ku istaag ee DHAANTO DHAADHAAN ku kortumo
Gabdhaha Muslimiintaa oo lagu faro xumeeyo aabayaashood hortooda si loo bahdilo.
Biilashadii Caanaha Caruurta mar hore la diley Waalidkood.
— Waxaas oo dhan meel cidlaa kuma dhacahayaan.
Alle ayaa xataa u kala garsoori – caruurtii Yuhuuda ee Nazigu Foornada ku gurey, waaba Muslimiinta Soomaaliyeed ee iley Luf Luf Axmaaro uu ku gurey Jeel Ogaadeen.
– Waxaan jeclaa inaan arko iley oo shabaq ku jiro asagoo dabo gaab qabo in Jig jiga lagu dhex wareejiyo, ka hor intaan lagu hilmaamin Jeel Xabasho.
ina iley iyo ku wii la shaqeyn jiray wixii ay galabsadeen hala mariyo yaan looga badin
Ma laha dhaqanka Islaamka.Waa dad ka yaabiyay Ummada Ethopiya ee ay isku wadanka yihiin.Ma jiro dad laayay dadkooda oo ciyaar dhaqameed ku dul ciyaara.Ma yaqaanaan inay caadi u noolaadaan ilaa ay la yimaadaan dhaqan xumo ay ugu dhawaanayaan Masterkoda.Waa in la cadaabaa ninkan iyo wixii la shaqaynjirtay.
Absame jidwaaq iyo daarood ismaaciil midna dagaal nagama dhexeeyo gaar ahi laakiin waxaan dagaashanahay somaliya oonu la midawnay anakoo dalgaara ah sidaa u garta oo hanoo kala eexanina somaliya iyo jam somland nimayahaw daarood ha iloobina in jam somland daarood degen yahay xamar ponu wax isku darsanay 60kii baanu ishaynaaye garta eexo naga daaya waanu idiin gudboonahaye